अन्तर्राष्ट्रिय समाचार Archives - Babal Khabar
Jan232022 by बबाल खबरNo Comments
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, मनोरञ्जन
भिडियो हेर्नुस, भारतकी विश्वप्रख्यात गायिका लता मंगेशकरको मृ त्यु भएको समाचार आइरहेको छ । ९२ वर्षकी लतालाई मुम्बईको एउटा अस्पता लमा रहेकी छन् । संक्र मणपछि उनमा निमो नियाको संकेत देखिएको बताइएको थियो । लगत्तै अस्पतालमा भर्ना गरेर हिजोदेखि उपचार थालिएको समाचारमा जनाइएको थियो । मुम्बईका मेयर किशोरी पेड्नेकरका अनुसार आईसीयुमा राखेर उपचार गरिए पनि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रंदै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा उनको उमेरलाई लिएर चिकित्सकहरु बढी सजग भएकाले उनलाई आईसी यूमा राखिएको थियो । लता मंगेशकरको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालका उत्कृष्ट चिकित्सक टोलीले उपचार गरिरहेको छ र उनको स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार भइरहेको जनाएको छ । लता जीले आफ्नो आवाजको लागि भारत सरकारबाट भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार र राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार जस्ता धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसकेका छन्। सात ...
भिडिय१ हेर्नुस, काठमाडौं । आइतबार बेपत्ता भएकी बङ्गलादेशी अभिनेत्री राइमा इस्लाम शिमुको मृ' शरीर बोरामा फेला परेको छ । शिमुको दुई टुक्रा अवस्थामा मृ'त श'रीर बोरामा फालिएको थियो । प्रहरीका अनुसार सोमबार बिहान ढाकाको केरानीगञ्जको आलियापुर क्षेत्रको हजरतपुर पुल नजिकै सडक किनारमा मृ'त शरीर फेला परेको हो । ३५ वर्षीया अभिनेत्रीको घाँ'टीमा पनि दा'ग थियो । प्रहरीले यस घट'नामा संलग्न भएको भन्दै अभिनेत्रीका श्रीमान् र साथीसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । मंगलबार दिउँसो ढाका प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेत्रीका श्रीमान सखावत, उनका साथी र चालकलाई तीन दिनको म्याद थप गरेको बताएको छ । त्यसपछि उनले घरायसी विवादका कारण श्रीमती राइमाको ज्या'न लिइएको स्वीकार गरेका छन् । सुटिङका ​​लागि गएकी थिइन्, त्यसपछि फर्किइनन् राइमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको ग्रीन रोड क्षेत्रमा श्रीमान् र दुई सन्त...
Jan202022 by बबाल खबरNo Comments
भिडियो हेर्नुस, काठमाडौं । सानै उमेरमा अर्बपति भएकी एक महिलाको अल्पायूमा नै निधन भएको छ । सोशल कम्युनिटी प्लेटफर्म ‘पंखुडी’ र घर भाडामा दिने स्टार्टअप ‘ग्राभहाउस’ जस्ता स्टार्टअपकी संस्थापक पंखुडी श्रीवास्तवको निधन भएको हो । झाँसीमा जन्मिएकी ३२ वर्षीया अर्बपति उद्यमी महिला पंखुडी श्रीवास्तवको मृत्युको खबरले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । पंखुरी श्रीवास्तवको हृदयघातका कारण निधन भएको हो । उनी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिइन् । क्मपनीले ट्विटरमा जारी गरेको शोक सन्देशमा भनिएको छ, ‘हाम्रो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंखुडी श्रीवास्तवको २४ डिसेम्बरमा अचानक हृदयघातका कारण निधन भयो ।’ उनका बुबा र कान्छो भाइ बेङ्गलोरमा छन् । डिसेम्बर २४ मा हृदयघातका कारण उनको निधन भएको थियो । शवलाई झाँसी ल्याइयो र २६ डिसेम्बरमा अन्तिम संस्कार गरियो । पंखुडी श्रीवास्तवले आफ्नो बाल्यकालका साथी, का...
भिडियो हेर्नुस, एक व्यक्तिलाई आफ्नी श्रीमतीसँग परपुरुषले शा री'रि'क स म्ब'न्ध राखेको हेर्ने इच्छा थियो । उनले आफ्नो यो इच्छा पूरा गर्नको लागि आफ्ना एक साथीलाई घरमा ल्याए । उनकी पत्नीलाई यो कुरा थाहा थिए । घटना सिंगापुरको हो । सिंगापुरको प्रमुख अखबार स्ट्रेट टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार यो दम्पतीको बिहे भएको २३ वर्ष भइसकेको छ । ४८ वर्षका श्रीमानले आफ्नी ४४ वर्षकी श्रीमतीलाई परपुरुषबाट बल'त्क'र गराउने र आफूले हेर्ने योजना बनाए । यसका लागि उनले ४५ वर्षका साथीलाई घरमा लिएर आए । उनले पहिले म'दिरामा बे होसीको औषधि मिसाएर श्रीमतीलाई बे होस बनाए । त्यसपछि उनले श्रीमतीको आँखामा पट्टी बाँ धेर सुताए । त्यसपछि उनले साथीलाई श्रीमतीसँग शा रीरि' स म्ब'न्ध राख्न पठाए । तर, जब ती व्यक्तिले महिलालाई ब ला'त्का'र गर्न खोज्दै थिए त्यही बेला महिलालाई होस आयो त्यसपछि ती व्यक्ति त्यहाँबाट भागे ।...
पुरा खबर, एजेन्सी। महिला डाक्टरको सामूहिक ब’ला’त्का’र’प’छि ह’त्या गरेर श’व जलाउने चारैजना अभियुक्तलाई पुलिसले त्यही ठाउँमा लगेर इन्काउन्टरमा मा'रिदिएको छ। हैदराबादको एनएच ४४ हाइवेमा उनीहरुले २७ नोभेम्बरको रात महिला डाक्टरलाई ब’ला’त्का’र गरेर मारेका थिए। तेलंगना पुलिसले त्यही हाइवेमा चारै जना आरो'पीलाई इन्का'न्टर गरिदिएको हो। हैदराबाद पुलिसले चारैजना आरोपीलाई त्यो ठाउँमा लिएर गएको थियो जहाँ महिला डाक्टरको जलेको श'व भेटिएको थियो। पुलिसले चारैजना आ'रोपीलाई घट'नाको ‘रिक्रिएशन’ गर्नको लागि त्यो ठाउँमा लिएर गएको थियो। यो इन्काउन्टर शुक्रबार बिहान भएको हो। यसअघि महिला डाक्टरमाथि भएको क्रुरतावि'रुद्ध देशभर प्रदर्शन भइरहेको थियो। मानिसहर सडकमा उत्रिएर महिला सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका थिए। पुलिसका अनुसार घटनाको रिक्रिएशनका लागि लगिएका चारैजना आरोपीले भाग्ने कोसिस गरेपछि चारैजना...
Jan102022 by बबाल खबरNo Comments
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, रोचक
भिडियो हेर्नुस, काठमाडौं। सहरमा घुमिरहेका रोबोट र हावामा उडिरहेका गाडीहरु अब फिल्ममा मात्र देखिने कुरा रहेन । साउदी अरेबियाले यस्तै साइ–फाइ सहर बनाउँदैछ जहाँ रोबोटले मानिसको सुरक्षादेखि लिदएर सेवा समेत गर्नेछन् । कार हावामा उड्नेछन्, कृत्रिम बादलले पानी पार्नेछन् । यो सहरमा कृत्रिम चन्द्रमा पनि हुनेछ जो हरेक रात उदाउनेछ । ५०० अर्ब डलरको लागतमा बन्ने यो सहर लण्डनभन्दा १७ गुणा ठूलो हुनेछ ।साउदी अरेबियाको ताबुक राज्यमा यो सहर बसाइनेछ । यो सहरको नाम नियोम हो । जुन कम्पनीले यो प्रस्तावित सहरलाई किनेको छ र यसलाई बनाउने जिम्मा लिएको छ त्यो कम्पनीका योजना यति महत्वाकांक्षी छन् कि सहरमा प्रयोग हुने कैयौं प्रविधि अहिलेसम्म अस्तित्वमै छैनन् । बेलायतको अखबार द सनको एक रिपोर्टअनुसार नियोम सहर जोर्डन र मिस्रको सीमा नजिकै हुनेछ । यो सहर अबको ३ वर्षपछि २०२५ सम्म मानिसहरु बस्नको लागि बनेर तयार ...
Jan92022 by बबाल खबरNo Comments
दक्षिण कोरियामा कहाँ–कहाँ छ शारी’रिक सम्प’र्कको अ’ड्डा ?
भिडियो हेर्न तल थिच्नुस, एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा शारी'रिक सम्प'र्कको व्यापार गै'रका'नूनी छ । तर कोरिया महिला विकास संस्थानका अनुसार, कोरिया'मा यो व्यापार सन् २००७ मा नै १४ ट्रिलियन दक्षिण कोरियाली वन ( १३ बिलियन अमेरिकी डलर) को अनुमान गरिएको थियो, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग १.६ प्रतिशत हो। कोरिया युनिभर्सिटी कलेज अफ मेडिसिनको युरोलोजी विभागले सन् २०१५ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार १८–६९ वर्षका २३.१ प्रतिशत पुरुष र २.६ प्रतिशत महिलाले शा'रीरिक स'म्पर्कको व्यापार गर्नेहरुसँग शारी'रिक सम्प'र्कको अनुभव गरेका थिए। व्यापारमा सन् २००७ मा करिब ९४ मिलियन लेनदेन भएको थियो, जुन २००२ मा १७ करोड भन्दा कम थियो। सोही अवधिमा पेसामा लाग्ने संख्या १८ प्रतिशतले घटेर २,६९,००० पुगेको थियो। शारीरिक सम्पर्कको अ'ड्डाका लागि व्यापार गरिएको पैसाको मात्रा १४ ट्रिलियन वोन भन्दा बढी थियो । का'...
Jan52022 by बबाल खबरNo Comments
आमाले १ दिनको बच्चालाई सडकमा छोडिन्, साथमा यस्तो चिठी लेखेर राखिदिइन् जुन पढ्दा सबैका अाँखा रसाय
भिडियो हेर्नुस, काठमाडौं। सन्तान जस्तो भए पनि आमाको मन सन्तानप्रति अत्यन्तै विशाल र उदार हुन्छ भन्ने हामीले मान्दै आएका छौं । आमाले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सन्तानको रक्षा गरेको हामीले देख्दै आएका छौं । तर, कहिलेकाहीँ परिस्थिति र बाध्यताले यस्ता घटनाहरु पनि भएका भेटिन्छन् जहाँ स्थिति अलग हुन्छ । अमेरिकाको अलास्कामा यस्तै घटना भएको छ । यहाँ एक बच्चा निर्जन स्थानमा कार्टुनभित्र राखिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । ती बच्चाको साथमा एउटा पत्र पनि भेटिएको छ जुन पत्र उनकी आमाले लेखेर राखिदिएकी थिइन् । यो घटनाको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । बच्चालाई आमाले अत्यन्तै चिसो मौसममा लावारिस छाडेर गएकी थिइन् । जतिबेला यी बच्चालाई अरु मानिसले फेला पारे त्यतिबेला त्यहाँको तापक्रम १२ डिग्रीभन्दा पनि कम थियो । आमाले बच्चालाई ठिक त्यही दिन आफूबाट अलग गरिन् जुन दिन उनी जन्मिएका थिए । न...
Dec312021 by बबाल खबरNo Comments
यस्तो अचम्मको शिशु जन्मिएपछि अस्पतालमा भीड !
भिडियो हेर्नुस, काठमाडौ । कहिले काँही प्रकृतिलाई नै अचम्म बनाउने घटना हुन्छन् । यस्तो घ'टनाले आश्चर्यमा पार्छन् । भारतको बिहारस्थित गोपालगञ्जमा शुक्रबार यस्तै अचम्मको घ'टना भएका् छ । एक महिलाले अचम्मको शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । शिशुको तीन हात, तीन खुट्टा भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । यसबारे थाहा हुने बित्तिकै अस्पता'लमा भीड उर्लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ । मोहम्मद रहिम अलीकी ३० वर्षीया श्रीमती रबिना खातुनलाई सुत्केरी व्यथाले च्या'पेपछि उनलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भर्ना गरियो । यहाँ उनको नर्मल डेलिभरीका बेला एउटा अचम्मको बच्चाको जन्म भयो । यो बच्चाका तीन खुट्टा र हात छन् । सीएचसीमा ड्युटीमा तैनाथ चिकि'त्सक डाक्टर आफताब आलमले सिन्ड्रोमका कारण यस्तो असाधारण शिशुको जन्म भएको हो, यस्तो एक लाख केसमा देखापर्छ । डाक्टरका अनुसार परिवारका सदस्यले अल्ट्रासाउन्ड...
Dec232021 by बबाल खबरNo Comments
श्रीमानलाई ढाँटेर विवाहित डाक्टर संग प्रेम, डाक्टरले लगाइदिए यस्तो इन्जेक्सन !
भिडियो, काठमाडौ । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण एक महिलाले अनाहकमा ज्या न गु’माउनु परेको छ । श्रीमानलाई ढाँटेर प्रेमीसंग गएकी एक महिलाको नि’ध’न भएको छ । विवाहित महिलाको एक डाक्टरसंग प्रेम थियो । ति डाक्टर पनि विवाहित थिए । तर ति डाक्टरले भने प्रेमको नाटक मात्र गरेका थिए । भारतको गाजियाबादमा, प्र’हरीले सेप्टेम्बर ७ मा डा’स’ना क्षेत्रबाट हराइरहेकी एक महिलाको खोजी थालेपछि यस्तो र’हस्य खुलेको हो । डाक्टर प्रेमीले महिलालाई प्रेमको नाटक गरे ।उनलाई नोएडा लगे र त्यसपछि वि’षा’लु इन्जेक्सन लगाइदिए । सु’ई लगाएपछि ति महिलालाई चण्डीगढ़ लिएर गएको समेत खुलेको छ । महिला ह’राएको लामो समय पछि उनको फोनको अनुसन्धान गर्दा ति महिला उनै डाक्टरसंगको सम्पर्कमा रहेको खुलेपछि प्र’हरीको अनुसन्धानको घेरामा ति डाक्टर आएका थिए ।अहिले ति डाक्टरलाई प्र’हरीले प’क्राउ गरेको छ । सेप्टेम्बरमा ७ मा ३१ वर्षीया महिला शबा...